အိချောပိုရဲ့ မွေးနေ့မှာ ရွှေဆွဲကြိုး (၁၀) ကုံးမဲပေါက်သွားခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ – XB Media Myanmar
အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးလွန်းတာကြောင့် အဆိုပိုင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာသာမက ဒါရိုက်တာပိုင်းမှာပါ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး ရှေ့ဆက်နေတဲ့ ယုန်လေးကတော့ အောင်မြင်မှုနေရာတစ်ခုရထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ ယုန်​​လေးက အနုပညာညီမ​လေး အိ​ချောပိုရဲ့၂၈နှစ်​ပြည့်​​မွေး​နေ့ပွဲ​လေးသို့ တက်​​ရောက်​ရင်း ​ရွှေဆွဲကြိုး​လေး မဲ​ပေါက်​ခဲ့တဲ့အ​ကြောင်း လူမှုကွန်​ယက်​​ပေါ်မှာ ​ဝေမျှ​ပေးထားတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။
ချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ မင်းသမီး​ချော​လေး အိ​ချောပိုရဲ့ ​မွေး​နေ့ပွဲမှာ ​ပျော်စရာ​တွေချည်းကြုံ​တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကံ​ကောင်းသူကြီး ​ယုန်​​လေးရဲ့အ​ကြောင်းကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။
ယုန်​​လေးက​တော့ “Happy Birthday Par ညီမလေး .ယခုထက်ပို အောင်မြင်မူ့များစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ .ညီမလေးပွဲမှာ အမှတ်တရ ကံစမ်းမဲ ရွှေဆွဲကြိုးလေးပေါက်ပါတယ် . အမြဲတမ်းသိမ်းထားပါ့မယ် .” ဆိုပြီး ကြည်​နူးစွာ ​ရေးသားထားတာပါ။
အိ​ချောပို​မွေး​နေ့မှာ ​ရွှေဆွဲကြိုး​တွေ မဲ​ပေါက်​သွားကြတဲ့ ကံထူးသူ​တွေ
အဆိုတော်တစ်ဦးအနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ ယုန်လေးကတော့ အနှစ်သာရရှိတဲ့ သီချင်းတွေကိုလည်း ထိထိမိမိရေးသားသီဆိုတတ်သူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်​သီချင်း​လေး​တွေကိုလည်း ခံစားချက်​အပြည့်​နဲ့ ဖန်​တီး​တတ်​တဲ့ ယုန်​​လေးရဲ့ တကယ့်​အချစ်​​ရေးက​တော့ အခုအချိန်​အထိကို ငြိမ်​သက်​​နေဆဲပါပဲ​နော်​။ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း အရမ်းကို ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ ယုန်လေးနဲ့ အိ​ချောပိုတို့ အနုပညာ​မောင်​နှမနှစ်​​ယောက်​ကိုချစ်​ရင်​ share သွားကြဖို့ မ​မေ့ပါနဲ့​နော်​။
အနုပညာကို ခဈြမွတျနိုးလှနျးတာကွောငျ့ အဆိုပိုငျးနဲ့ သရုပျဆောငျပိုငျးမှာသာမက ဒါရိုကျတာပိုငျးမှာပါ အကောငျးဆုံးကွိုးစားပွီး ရှဆေ့ကျနတေဲ့ ယုနျလေးကတော့ အောငျမွငျမှုနရောတဈခုရထားတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ လတျတလောမှာတော့ ယုနျလေးက အနုပညာညီမလေး အိခြောပိုရဲ့၂၈နှဈပွညျ့မှေးနပှေဲ့လေးသို့ တကျရောကျရငျး ရှဆှေဲကွိုးလေး မဲပေါကျခဲ့တဲ့အကွောငျး လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ ဝမြှေပေးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။
ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ မငျးသမီးခြောလေး အိခြောပိုရဲ့ မှေးနပှေဲ့မှာ ပြျောစရာတှခေညျြးကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ ကံကောငျးသူကွီး ယုနျလေးရဲ့အကွောငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ယုနျလေးကတော့ “Happy Birthday Par ညီမလေး .ယခုထကျပို အောငျမွငျမူ့မြားစှာပိုငျဆိုငျနိုငျပါစေ .ညီမလေးပှဲမှာ အမှတျတရ ကံစမျးမဲ ရှဆှေဲကွိုးလေးပေါကျပါတယျ . အမွဲတမျးသိမျးထားပါ့မယျ .” ဆိုပွီး ကွညျနူးစှာ ရေးသားထားတာပါ။
အိခြောပိုမှေးနမှေ့ာ ရှဆှေဲကွိုးတှေ မဲပေါကျသှားကွတဲ့ ကံထူးသူတှေ
အဆိုတျောတဈဦးအနနေဲ့ အနုပညာလောကထဲကို ဝငျရောကျလာတဲ့ ယုနျလေးကတော့ အနှဈသာရရှိတဲ့ သီခငျြးတှကေိုလညျး ထိထိမိမိရေးသားသီဆိုတတျသူတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခဈြသီခငျြးလေးတှကေိုလညျး ခံစားခကျြအပွညျ့နဲ့ ဖနျတီးတတျတဲ့ ယုနျလေးရဲ့ တကယျ့အခဈြရေးကတော့ အခုအခြိနျအထိကို ငွိမျသကျနဆေဲပါပဲနျော။ခဈြပရိသတျတှလေညျး အရမျးကို ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ယုနျလေးနဲ့ အိခြောပိုတို့ အနုပညာမောငျနှမနှဈယောကျကိုခဈြရငျ share သှားကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
၂၀၁၉ မှာ နှစ်ဟောင်းက အဆိုးတွေ သင်ခန်းစာယူပီး အဆင်သင့်ဖြစ်စေဖို့